अभिभावक सूचना पत्रहरू - अर्डर फारम
SarcoidosisUK को प्रबन्ध गर्न को लागी तल फारम को प्रयोग गर्नुहोस रोगी सूचना पत्रक मुक्त। यदि तपाईं एक हेल्थकेयर प्रोफेशनल हुनुहुन्छ र 50 भन्दा बढी पत्रपत्रहरू चाहिन्छ भने, कृपया एक निश्चित NHS पोष्ट र ईमेल ठेगाना प्रयोग गरी निश्चित गर्नुहोस्। यी पत्रपत्रहरूको लागतमा योगदान दिन कृपया दान गर्नुहोस्.
पोस्टल ठेगाना (निर्माण नाम / नम्बर, सडक र शहर समावेश गर्दछ)
कितने 'सरकोडोसिस यू - हामी पत्रपत्रहरू को हुन्? कितने 'सरकोडोसिस यू - हामी पत्रपत्रहरू को हुन्?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कतिपय 'सरकोडोसिस अवलोकन' पत्रपत्रहरू? कतिपय 'सरकोडोसिस अवलोकन' पत्रपत्रहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र लुंग' पत्रपत्रहरू? कितने 'सरकोडोसिस र लुंग' पत्रपत्रहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र थकान' पत्रपत्रहरू? कितने 'सरकोडोसिस र थकान' पत्रपत्रहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र छाला' पुस्तिकाहरू? कितने 'सरकोडोसिस र छाला' पुस्तिकाहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र आँखा' पत्रक? कितने 'सरकोडोसिस र आँखा' पत्रक?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र जोट्स, मांसपेशिहरु र हड्डियों को पत्रक? कितने 'सरकोडोसिस र जोट्स, मांसपेशिहरु र हड्डियों को पत्रक?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कति 'सरकोडोसिस र हार्ट' पत्रपत्रहरू? कति 'सरकोडोसिस र हार्ट' पत्रपत्रहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र नर्वस सिस्टम' पत्रपत्रहरू? कितने 'सरकोडोसिस र नर्वस सिस्टम' पत्रपत्रहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितने 'सरकोडोसिस र लिवर' पत्रपत्रहरू? कितने 'सरकोडोसिस र लिवर' पत्रपत्रहरू?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
कितना 'कर्मचारीहरु को पत्रहरु को लागि जानकारी? कितना 'कर्मचारीहरु को पत्रहरु को लागि जानकारी?कुनै पनि होइन1 पत्रक2 leaflets3 leaflet4 पुस्तिकाहरू5 leaflet10 leaflet15 leaflet20 leaflet30 पुस्तिकाहरु50 leaflet
डिलिवरी विवरणहरू (वैकल्पिक)